Aleo mifanena amin’ny mpamosavy | NewsMada
Aleo mifanena amin’ny mpamosavy
Aleo, hono, mifanena amin’ny mpamosavy toy izay mifanena amin’ny mpandainga. Zava-doza ny lainga: mora atentina, fa sarotra ialana. Toy ny vary aloha: mahafatra-po fa tsy mahavita taona. Toy ny salaka, ny tompony ihany no afatony. Hehezin’ny akoho tokana anaka ny lainga marivo tototra. Inona no itanisana izany eto?
Mampandainga ny zava-misy: sanatria, zary rivotra fohina amin’ny fofona maimbo noho ny fako eto Antananarivo Renivohitr’i Madagasikara ny karazana lainga etsy sy eroa. Tsy hita na tsy aseho ny marina, ka manjaka ho azy ny lainga sy ny diso. Inona na aiza? Tsy hamafy lainga eto ny tena, fa sofi-mandre sy saina mandinika ny tsirairay.
Amin’ny resaka mandeha, kabary, fanamarinan-tena, fandresen-dahatra, fanazavan-kevitra… Heverina ho tsy mahataka-javatra ny hafa? Eo ny hoe: ny marina rehetra tsy famoaka avokoa. Izay (kely) mivoaka rehetra koa, tsy voatery ho marina avokoa. Ny vava, hono, no tsy atao be, tsy laitra ny mamerina azy. Fatorana amin’ny vavany ny olona.
Raha vao mandainga indray mandeha, tsy afaka intsony? Na raha mandainga amin-javatra iray any am-boalohany, mandainga hatramin’ny farany… Fa mila mitadidy izay lazainy ny mpandainga mba tsy ho sarona amin’ny tsy marina ataony na lazainy. Na ahoana na ahoana, voafitaka voalohany amin’ny lainga ataony ny mpandainga.
Vato an-tanimbary ny lainga: raha tsy hitan’ny angady lohataona aza, azon’ny antsy fararano. Izay no mampangina ny marina eo anoloan’ny lainga. Malaza ratsy amin’ny lainga eo anivon’ny vahoaka ny mpanao politika. Miara-dalana amin’izany ny mpitondra? Lasa mitondra ny mpanao politika, na lasa manao politika ny mpitondra.
Tsaroana eto ny nambaran’ny filoha amerikanina iray izay, Abraham Lincoln: “Afa-mamitaka ny olon-drehetra mandritra ny fotoana voafetra ianao, afa-mamitaka olona vitsivitsy mandritra ny fotoana rehetra, fa tsy ho vitanao ny mamitaka ny olon-drehetra mandritra ny fotoana rehetra.” Aleo mifanena amin’ny mpamosavy amin’izany?